Le yindlela iintlanzi ezithetha ngayo | Ngeentlanzi
Ngomnye wemibuzo emikhulu esihlala sizibuza yona. Zeziphi iimfihlo ezenziwa yi unxibelelwano yezilwanyana? Akukho baphandi bambalwa bafunda unxibelelwano lwezi zinto, nangona kunjalo, into eyimfihlo encinci yindlela abanxibelelana ngayo. intlanzi.
Kufuneka sivume ukuba sicinge kakhulu ngayo. Kwaye isisombululo asikafunyanwa, ubuncinci okwangoku. Sinezikrokro ezimbalwa malunga nendlela anokuthetha ngayo omnye komnye. Iintlanzi azithethi, kodwa iintlobo ezahlukeneyo zentetho ziyafumaneka kubo. izihlunu ezinokunceda ukunxibelelana nabantu abafuna ukukuthetha.
Ngaba banolwimi olulinganiselweyo? Ngendlela, ewe, nangona kufuneka sikhuphe ulwazi malunga nophando olushicilelweyo. Kukho izimvo ezinomdla kakhulu ezithi iintlanzi uva izandi, kodwa ayizizo zonke iintlobo ezikwaziyo ukunxibelelana. Isisombululo ekufuneka sinike iinkcukacha ezingaphezulu.
Into ephambili inokufumaneka kwisihlunu esibizwa qubha isinyi. Eli candelo, elinokubandakanywa kwezinye iintlanzi, liyakubavumela ukuba banxibelelane nabo bafuna ukuthetha Khawufane ucinge, umzekelo, ngexesha elithile wonke umntu kufuneka avume ukuhlala ekhuselekile. Inketho elungileyo iya kuba kukuhambisa esi sihlunu ukulumkisa abanye abadlali beqela.
Nangona kunjalo, kufuneka sazi ukuba ulwimi lwentlanzi limited, kuba banxibelelana kuphela nokuziqhelanisa, namaqabane kwaye boyikise amaxhoba. Ingqokelela yezandi abanokuzenza ziyimfihlakalo, nangona izigqibo zisithi zixhomekeke kudidi, kungoko sinokucinga ukuba oku kunokwenzeka kuphela.
Ngamafutshane, siphendula ukuba iintlanzi zenza Uyakwazi ukunxibelelana. Kuxhomekeka kuhlobo lweentlanzi. Abanye banesakhono, kwaye abanye abanalo, kodwa bonke banokumamela. Into esisafanele ukufumanisa ukuba ziindidi zezandi abanokuzenza. Imfihlakalo esithemba ukuba iya kusonjululwa ngokukhawuleza.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Zahluke njani iintlobo zentlanzi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Zithetha njani iintlanzi?